Jabuuti oo karaar-siisay xiisaheeda martgelinta wada hadalka DF-Somaliland
Jabuuti oo karaarsiisay olale ay ku wada hadalsiineyso DF iyo Somaliland
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hogaamiyeyaasha labada dhinac hordhigay rabitaanka dowladiisa.
HARGEYSA, Somaliland – Jabuuti ayaa karaar-siisay xusul-duubka ay ugu jirto in ay martigeliso wada hadaladda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, siday ku waramayan illo wareedyo diblumaasiyadeed.
Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha wadankaasi, ayaa hogaamiyeyaasha labadda dhinac wuxuu hordhigay rabitaanka dowladiisa ee ay noqdaan madasha lagu qabanayo wada xaajoodyada xasaanada culus leh.
Bishii hore ee August, Farmaajo oo tegay Jabuuti ayna kawada hadleen suurtogalnimadda ayaa illo xog-ogaal ahi sheegayaan in uu soo dhaweeyay arrintaasi, wallow aanu ahayn go’aan kama dambeys ah.
Talaadada maanta ah, 3-da September 2019, Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Somaliland, ayaa u dhoofay Jabuuti kadib marti qaad uu ka helay Geelle, oo doonaya in uu "ka dhaadhiciyo" in uu u kala dab-qaado labada daraf.
Warbixinadda ayaa intaasi raacinaya in Farmaajo iyo Biixi ay si rasmi ah u ogolaadeen in ay wada hadlaan, balse dooda ugu culus ay ka taagan tahay dalka lagu kulmayo iyo ajendeyaasha labada hadli doono.
Isniintii 2-da September, madaxtooyadda maamulka Hargeysa oo faafisay shan shuruud oo ay miiska wada hadalka kusoo xaadiri karaan ayaa waxaa ku jirtay "madal dhexdhexaad ah iyo ajendeyaal cad-cad".
Wada hadaladda oo hakad ku jira tan iyo sanadkii 2011-kii ayaa markii ugu dambeysay waxaa lagu qabtay Turkiga, iyadda oo uu kasii horeeyay Imaaraadka, midkoodna kama soo bixin natiijo wax ku ool ah.
Qadiyadda loo maara la'yahay ee keentay in ay dhicisoobaan wada xaajoodyadaasi ayaa waxaa qayb ka ah gooni u goosaadka ay mas’uuliyiinta Somaliland sheegtaan taasi oo aysan aqoonsi u helin.
Dad aad ula socday kulamadaasi ayaa tibaaxay in kaliya ay isla soo qaadeen wakiilada arrimo quseeya bini'aadanimada iyo maamulka hawada, oo ay haatan xurguf ka taagan tahay.
Cabdiraxmaan Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland, ayaa dhowaan soo jeediyay in la helo khuburo aad u darasta ajendeyaasha iyo in laga fogaado fashil mar kale ku yilmaada wada hadalka.
Dowladda Puntland oo xuduud la leh Somaliland uuna kala dhaxeeyo muran gobolada Sool iyo Sanaag ah ayaa horey u codsatay in laga qeybgeliyo wada hadaladda.
Su'aallo ayaa la iska waydiinayaa waxa kasoo bixi kara hadii ay Jabuuti uu hirgalo codsigeeda, wallow ay loolan kala kulmeyso Itoobiya, Turkiga, Sweden iyo dalal kale oo dhankooda isha ku hayo martigelinta.
Waa muwaadinkii labaad oo kasoo jeeda Itoobiya, kaasi oo lagu dilo gudaha Somaliland...
Wafdiga DF ku metelaya wadahadalka Somaliland oo u dhoofay Jabuuti
Soomaliya 14.06.2020. 10:30
Su'aallo laga keenay war-murtiyeedkii laga soo saarey shirkii Jabuuti
Somaliland 23.06.2020. 18:30
Mas'uuliyiinta DF iyo Somaliland uga qeybgaleysa shirka Jabuuti
Soomaliya 14.06.2020. 10:00
Geelle iyo Keating oo ka wada hadlay Colaadda Tukaraq
Afrika 12.06.2018. 01:43
Jabuuti oo lagu bogaadiyey martigelinta shirka DF iyo Somaliland
Soomaliya 15.06.2020. 09:10
Dowladda Soomaaliya oo Sharci darro ku tilmaantay Heshiiska DP World iyo Somaliland
War Saxaafaded 02.03.2018. 14:22
Maxay Nairobi xudun ugu tahay ololaha doorashada hogaanka Soomaaliya? 26.10.2020. 10:09
Ciidamadda Kenya oo xorriyadooda u celiyey Soomaali ay "afduubteen" 26.10.2020. 09:05
Waare oo la baafinayo xilli ay qaylo-dhaan kasoo yeereyso HirShabelle 26.10.2020. 08:00
Ciidamadda Yahuuda oo "jirdilay ku khaarijiyey wiil Falastiini ah" 26.10.2020. 07:00
Fahfaahin laga bixiyey meydka gabar laga helay magaalada Boosaaso 25.10.2020. 21:00
Madmadowga ku xeeran dib-u-furitaanka jidadka Muqdisho 25.10.2020. 19:10